यात्रामा बान्ता आउँछ ? त्यसोभए यस्तो गर्नुहोस् – GoodNews24 – Good News24
Home/अन्य/यात्रामा बान्ता आउँछ ? त्यसोभए यस्तो गर्नुहोस् – GoodNews24
यात्राको क्रममा टाउको दुख्ने, बान्ता हुने ,थकित हुने इत्यादि समस्याहरूको सामना गर्नु पर्ने व्यक्तिहरूका लागि रमाइलो यात्रा भनेको कल्पना मात्र हो। यो समस्या जुन यात्राको क्रममा हुन्छ यसलाई मोशन सिकनेस भनिन्छ। धेरै व्यक्तिलाई कार वा बस यात्रामा बान्ता टाउको दुख्ने समस्या हुन्छ,धेरै मानिसहरू कार वा रोटे पिङ्ग खेल्दा र हवाई यात्राको क्रममा समेत यसको शिकार हुन्छन्। यस समस्याको समाधानका लागि स्वदेशी औषधिहरू बिदेशी औषधिहरू भन्दा बढी प्रभावकारी मानिन्छ। यदि तपाईंको यात्रा बान्ता, टाउको दुख्ने आदिको कारणले रमाइलो हुन सकेको छैन भने हामी यहाँ केहि उपायहरू बताउनेछौ जसले तपाईंको समस्या समाधान हुन सक्छ।
– आफुलाई केहि कार्यमा ब्यस्त राख्नुहोस ।
यात्राको क्रममा तपाइको सोचाइ समस्या तर्फ गयो भने समस्या झन बढ्न सक्छ । त्यसैले यात्रामा मनोरन्जनात्मक कार्यहरु किताव पढ्ने, गित सुन्ने या मुभी हेर्ने गर्न सक्नुहुन्छ । जसले गर्दा तपाइको मस्तिस्क स्थिर हुन मद्दत गर्छ र यात्रामा हुने समस्या पनि कम हुन्छ । साथै यदि कोहि उल्टी गर्दै छ भने उसलाई नहेर्नुहोस । टाढाको दृश्य हेर्ने गर्नुपर्छ । यात्राको बेला गाडि चलिरहेको दिशामा बस्नाले पनि मोसन सिक्नेस कम हुन सक्छ ।
– खानामा ध्यान दिनुहोस ।
यदि लामो यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने हेभी खाना खानु भन्दा हल्का खानाहरु खानु नै उत्तम हुन्छ । सकेसम्म चिल्लो कम भएको दाल, भात, तरकारी खाने
– पुदिना र अदुवाको रस
पुदिना र अदुवाको रस सुघ्नाले यात्रामा हुने समस्या कम हुने केहि मानिसहरुको विश्वास छ । पुदिना र अदुवा को रस रुमालमा छर्केर सुघ्दै यात्रा गर्दा तपाइँ रिलिफ महशुस गर्न सक्नुहुन्छ ।
– स्याउको जुस
स्याउको जुसमा कम क्यालोरी हुन्छ । यसले शरीरमा सुगरको साथै पानीको पूर्ति पनि गर्दछ । यदि यात्राको क्रममा अस्वस्थ महशुस भएमा एक घुट स्याको जुस पिउदा आराम मिल्छ ।
– सुपारी, निबुवा या ल्वाङ्ग
यात्रामा वान्ता हुन लागेको अवस्था आएमा कागती सुघ्ने या ल्वाङ्ग सुपारी मुखमा राखेर चुस्नाले वान्ता रोक्न सक्छ । यसको अलावा दालचिनी ,कालो नुन, सौफ को पनि प्राय गर्नाले पनि टाउको दुखाइ र उल्टी हुने समस्या रोक्न सकिन्छ ।
यदि सबै उपाय अपनाउन पनि उल्टी हुने अवस्था आयो भने रोक्ने प्रयास गर्नु भन्दा पनि उल्टी हुन दिनु नै राम्रो हुन्छ । उल्टी भइसके पछि तपाईलाई केहि आराम मिल्छ । उल्टी भए पछि राम्रोसंग मुख कुल्ला गरेर माउथ फ्रेश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यसबाट मुखको दुर्गन्ध हट्छ र तपाइँ फ्रेश महशुस गर्न सक्नुहुन्छ । कसैले बान्ता रोक्न अमिलो पदार्थ खाने गर्छन् तर अमिलो पदार्थको सेवनले कसैको बान्ता रोकिए पनि सबैमा यो लागू हुँदैन । समस्यामा कमी नआएमा बान्ता रोक्ने औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ ।